Chimwe, zviviri, zvitatu-pamusoro pezvioni zvinomirira zvepanyama, astral uye mupfungwa-mirwi-nyika; nyika yekristaro, yegirazi romudzimu.
Girazi remweya ndiyo nyika yekusika. Nyika yepfungwa, nyika yekubuda kubva pakasikwa; nyika yepfungwa inofungidzira kufungidzira kwekubuda uye kwekufungidzira zvaro; nyika yepanyika inoratidza kuratidzika.
Vol. 9 MAY, 1909. Nha. 2
Nguva yose yatinotarisa mugirazi tinoona chimwe chinhu chinoshamisa, chinoshamisa uye chisingaoneki. Chakavanzika hachirevi mufananidzo chete nekuratidzwa kwayo, asi mugirazi pachako, chinhu chaicho chinoratidza, chinangwa chaicho, uye icho chinomiririra.
Ndeipi iyo yatinoshevedza kuratidza, ndeye mumvuri? Aihwa? asi kunyange kana iri mumvuri, chii chiri mumvuri? Chinangwa chaipo icho girazi chinoshumira uye icho chinonyanya kushandiswa chiri muurongwa hwekupfekedza kwedu uye kuona kuti tinozviratidza sei kune vamwe. Girazi ndiro chiratidzo chekunyengera, kusingazivikanwi sechinyatsosiyana kubva kune chaiye. Mirror zviratidzo zvemuviri, astral, mupfungwa, uye mune zvekunamata.
Kufanana nezvinhu zvakawanda zvinodiwa kuti tive nekubudirira, tinogamuchira zvioni sezvinongova nyore uye zvinobatsira uye tinozviona sezvidimbu zvefaira. Mirror yakagara ichiitirwa mukuremekedzwa nevakwegura uye inofungidzirwa kuva mashiripiti, yakavanzika uye yakachena. Pakazosvika zana remakore gumi nematatu chimiro chekugadzirwa kwezvionioni chakanga chisingazivikanwi muEurope, uye kwemazana emakore chakavanzika chekugadzirwa chakanga chakachengetedzwa negodo neavo vaiva nacho. Mhangura, sirivha uye simbi zvakatanga kushandiswa semirazi kuburikidza nekuendeswa kumusoro. Gare gare yakaonekwa kuti girazi raizoshandira chinangwa chimwechete kana rakatsigirwa nemaggam ezvimedu zvakadai sesimbi, mutungamiri, zinc uye sirivha. Pakutanga zvioni zvinogadzirwa muEurope zvakanga zviduku muhukuru uye zvakadhura, iyo yakareba ine masendimita gumi nemaviri muhupamhi. Mazuva ano zvioni zvinodhura uye zvinogadzirwa chero zviyero zvatinoda.
Girazi ndiro iyo yenyaya yenyaya, kubva, mukati, kana kana kuburikidza, iyo chiedza uye mafomu muchiedza zvinogona kuonekwa.
Girazi ndiyo inoratidza. Chinhu chipi nechipi chinoratidza chinogona kunge chinonzi girazi. Chigoni chakakwana kwazvo ndicho chinoratidza zvakakwana. Iyo inonamatira kana kudzoka shure kwechiedza, kana zvinhu zviri muchiedza zvinoratidzika. Girazi rinonamatira, rinotendeuka, kana rinokanda kunze, kuratidzwa kwechifananidzo kana chiedza chinokandirwa pamusoro payo maererano nechinzvimbo kana kona painoiswa kubva mumufananidzo kana chiedza.
Chioni, kunyange chimwe chinhu, chinoumbwa nezvikamu zvakasiyana-siyana kana zvikamu, zvose izvo zvinodiwa kuita chioni. Zvikamu zvakakosha pagirazi ndiro girazi uye insimbi kana kuti amalgam yesimbi.
Apo girazi rine ruzivo rwakaiswa kune iyo, igirazi. Iyo girazi rakagadzirira kuratidza. Asi girazi haigone kuratidza zvinhu murima. Chiedza chinodikanwa kuti girazi kuratidze chero chinhu.
Kune mirati yakakwana uye isina kukwana. Kuti uve girazi rakakwana, girazi rinofanira kuva risina ruvara, pachena, uye zvose zviri zviviri zvinofanira kunge zvakanyatsofanana uye zvakaenzana kuwanda mukati. Izvo zvikamu zvealgam zvinofanira kunge zvine ruvara rumwechete uye unhu uye dzinorara pamwe chete mune imwechete yakabatana inopararira yakafanana uye isina gwapa pagirazi. Iyo mhinduro kana chigadziro chinogadzirisa chikamu chegirazi chinofanira kuva chisina kuchena. Ipapo chiedza chinofanira kuva chakajeka uye chakasimba. Apo zvose izvi zviitiko zviripo isu tine miririti yakakwana.
Chinangwa chegirazi ndechekuratidza chinhu sezvazviri chaizvo. Chioni chisina kukwana chinokurudzira, chinopera, chinokanganisa, izvo zvinoratidza. Chioni chakakwana chinoratidza chinhu sezvazviri.
Kunyange zvazvo ichiita sechiri nyore zvakakwana mukati mawo, girazi chinhu chisingazivikanwi uye chemashiripiti uye inoita chimwe chezvinhu zvakakosha uye zvinokosha munyika ino yepanyama kana mune imwe yenyika ina inoratidzwa. Pasina magirazi zvaisazova zvisingakwanisi kuti Ego kuve nekuziva chero ipi zvayo yenyika yakaratidzwa, kana kuti nyika dziratidzwe. Izvo ndezvisikwa, kubuda, kukanganisa uye kufungidzira kuti asina kuonekwa anoonekwa. Mirror haisi kurega kushandiswa munyika yepanyama. Mirror inoshandiswa munyika yose. Mirror inovakwa nemashoko enyika iyo yavanoshandiswa nayo. Nyaya uye chimiro chavanoshandisa zvinenge zvakasiyana mune imwe neimwe yenyika.
Kune marudzi mana emakiratiro: mirati yepanyama, miratidzi yepfungwa, mirangariro yepfungwa uye miratidziro yemweya. Kune marudzi mazhinji emhando imwe neimwe yemhando idzi dzezvioni. Marudzi ose egirazi ane nyika yake ine mavara akasiyana-siyana, uye marudzi mana emakiratiro ane vamiririri venyama munyika yavanofananidzirwa nayo.
Nyika chaiyo inofananidzirwa negirazi reimwe pamusoro; nyika ye astal negirazi rine nzvimbo mbiri; iyo pfungwa neyese ine nzvimbo nhatu, asi nyika yemweya inofananidzirwa nemirasi yose. Chiratidziro chaipo-chinenge chakafanana nenyika chaiyo, iyo inogona kuonekwa kubva kune rumwe rutivi chete-ikozvino, rutivi rwemuviri. Iyo mirara miviri yakatarisana inoratidza nyika yepasi, iyo inogona kuonekwa kubva kumativi maviri chete: izvo zvakapfuura uye zviripo. Chiratidziro chetatu chakatarisana chinomiririra nyika yepfungwa iyo inogona kutariswa uye inonzwiswa kubva kumativi matatu: yapfuura, yemazuva ano uye yemberi. Girazi yose-yakatarisana inomiririra nyika yemweya inosvika uye inozivikanwa kubva kune imwe neimwe uye nepamativi ose uye munguva yakapfuura, yemazuva ano uye yeramangwana inosangana nekusingaperi.
Icho chinhu chakakwirira ndege; mairi maviri echando; nhatu nhatu dzinoumba ganda; iyo yose-pamusoro, kristal sphere. Aya ndiwo zviratidzo zvemuviri zvezvionioni zvepanyama, zvepfungwa kana zvechidiki, zvepfungwa uye dzezvemweya zvenyika.
Zvinhu zvenyama ndiyo nyika yezviratidzo zvekufungidzira; iyo astral, nyika yezviratidzo; mafungiro, nyika yekusimudza, kutapudza, kukanganiswa; iyo yemweya, nyika yemafungiro, kuva, kutanga, kusikwa.
Nyika yepanyika ndiyo girazi rezvimwe zvose zvenyika. Zvose zvenyika zvinoratidzwa nenyika. Mukurongeka kwekuratidzwa, nyika yepanyika ndiyo iyo yakaderera pane iyo yakazadzirwa mukugadziriswa kwekutanga uye kutanga kwekushanduka kwezvinhu. Mukuratidzwa kwechiedza, apo chiedza chinosvika pasi kusvika pakadzika pasi, chinokanganisa kumashure uye chinodzokera kunzvimbo yakakwirira kubva kwairi kubva. Uyu mutemo unokosha. Inomiririra pfungwa yekushandura uye yekushanduka. Hapana chinhu chinogona kuchinjwa chisina kubatanidzwa. Hapana chiedza chinogona kuratidzwa negirazi risingakandwa pagirazi. Mutsara wechiedza sezvaanobaya girazi icharatidzwa pamakona imwechete kana kuti marefu apo inotarisa girazi. Kana rwonzi rwechiedza runokandwa pagirazi paakona ye45 degrees icharatidzwa pachigadziko ichocho uye tine kungoziva kona iyo chiedza chinokandirwa pamusoro pegirazi kuitira kuti tive nekwanise kutaurira pangeri pa iyo icharatidzwa. Maererano nemutsara wekuratidzwa nemweya unobatanidzwa munhau, uchafunga kuti wakashandurwa kuva mudzimu.
Nyika yepanyika inomisa nzira yekugadzirisa uye inoshandura iyo iyo inosanganiswa kumashure kwekushanduka kwekushanduka-shanduka, nenzira imwechete iyo girazi rinodzoka shure nekuratidza chiedza chinokandwa pairi. Zvimwe zvioni zvomuviri zvinoratidzira zvinhu zvepanyama bedzi, sezvinhu zvinowanikwa mune girazi rinotarisa. Zvimwe zvioni zvinooneka zvinoratidza chiedza kubva kuchido, mupfungwa kana mune zvekunamata.
Pakati pezvioni zvemuviri zvinogona kutaurwa nematombo, akadai se onyx, diamond uye crystal; zvidhina, zvakadai sesimbi, tini, sirivha, mercury, ndarama uye amalgam; matanda, akadai semouki, mahogany uye ebony. Pakati pemitumbi kana mitezo ziso ziso rinonyanya kuratidza chiedza chakakandwa pamusoro payo. Ipapo kune mvura, mhepo, uye denga, izvo zvose zvinoratidza chiedza, uye zvinhu zvakaitwa zvichionekwa nechiedza.
Zviratidzo zvemuviri zvine maitiro akasiyana-siyana. Kune dzakawanda-dzakasimbiswa uye dzakasimbiswa miriritsi. Pano pane concave uye convex, yakareba, yakafara uye yakaipisisa mirati. Kune mirimi inobereka zvinokanganisa zvinokanganisa, kukanganisa zvinhu zveiye anotarisana nazvo. Mhando idzi dzakasiyana dzemirazi dzinomiririra zvikamu zvenyika ino iyo mirati yeimwe nyika.
Zvinowanzoonekwa munyika zviri kuratidzwa kwezvaanoita munyika. Nyika inoratidza izvo zvaanofunga uye zvaanoita. Kana akazununguka uye achizunungusa chibhakera pairi, chichaita zvakafanana kwaari. Kana akaseka, kuratidzika kunoseka zvakare. Kana achishamisika, achaona kushamiswa kunoratidzwa pamutsara wose. Kana iye akanzwa kusuruvara, kutsamwa, makaro, mano, kusava nehanya, kuchenjerera, kusava, unyengeri, udyire, rupo, rudo, achaona izvi zvakagadziriswa, uye akadzokazve kwaari, nenyika. Kushandurwa kwose kwezvinonzwa, kutyisa, mufaro, kutya, kufadza, unyoro, godo, zvisina maturo, zvinoratidzwa.
Zvose zvinouya kwatiri munyika ndezvekuratidzira kwezvatakaitira kana munyika. Izvi zvingaita sezvisinganzwisisiki uye zvisiri zvenhema pamusana pezviitiko zvakawanda uye zviitiko zvinowira munhu panguva yakareba yehupenyu hwake uye izvo zvisingaoneki zvisingabvumirwi kana zvakabatana nemumwe wemafungiro ake nezviito. Kufanana nedzimwe pfungwa dziri itsva, zvinoshamisa, asi hazvisi nhema. Girazi richafananidza kuti ingangodaro sei; Mumwe anofanira kuziva mutemo usati wanyangadza.
Nokuedza nemirazi mumwe angadzidza nezvezvinhu zvinoshamisa. Regai mirara mikuru mikuru iiswe kuitira kuti isangane nemumwe uye regai mumwe atarise mune imwe yezvioni. Achaona kuratidzika kwake pachake paanotarisana naye. Regai iye atarise kuratidzwa kwekufungidzira kwaachazoona mugirazi shure kwake. Regai atarise zvakare mugirazi pamberi pake uye achazviona semufananidzo wekuratidzwa kwekutanga kwekuzviratidza kwake. Izvi zvichamuratidza zviratidzo zviviri zvekuona kwepamberi uye mbiri dzekuona shure kwake. Regai iye agutsikane neizvi, asi tarisai tarisa mberi uye achaona imwe kuratidzwa uye imwe uye imwe. Nenguva dzose sezvaanotarisa vamwe iye anovaona, kana ukuru hwezvioni zvinobvumira, kusvikira aona mafungiro ake pachake achitarisa ari kure kure neziso rinogona kusvika, uye kufungidzira kwake kuchaita semutsara wevanhu kutambanudza mugwagwa wakareba kusvikira vasisachaoneki nokuti ziso harigone kuona mberi. Isu tinogona kutakura mufananidzo wepanyama uchiwedzera nekuwedzera nhamba yezvioni kuitira kuti pave neine, masere, gumi nematanhatu, makumi matatu nemaviri, muviri uye akatarisana. Zvadaro nhamba yemafungiro ichawedzerwa uye anoedza haazovi nekutarira mberi uye mberi, asi achaona chimiro chake kubva kurudyi uye kuruboshwe uye kubva kumativi akasiyana-siyana. Mufananidzo uyu unogona kutakurwa uchienderera mberi nekuve nekamuri rose rakagadzirwa nezvionioni, pasi, denga uye masvingo mana ayo ari magirazi uye mumakona ayo anogadzirwa zvioni. Izvi zvinogona kupfuurirwa nekusingaperi. Zvadaro muongorori achave ari mu maze, anozviona iye kubva kumusoro uye kubva pasi uye kubva mberi uye shure, kubva kurudyi uye kuruboshwe; kubva kumativi ose uye mukuwedzera kwezviratidzo.
Chimwe chinhu chinoitika kwatiri kana chinoratidzwa kwatiri nezviito zveumwe munhu, zvingaratidzika sezvakasiyana nezvatiri kuratidza kana kuita munyika nhasi, uye, patinenge tichizviona kubva pamaonero ezviripo, isu hatizooni kuwirirana. Kuona kubatana kwatingada imwe imwe miririti, imwe inoratidza zvakaitika kare. Zvadaro tichaona kuti izvo zvakakandwa pamberi pedu kusvika-zuva, ndizvo zvinoratidza izvo zviri kumashure kwedu. Zviitiko zvisingakwanisi kutariswa kune zvinokonzera kana zvitubu, ndizvo zvinoratidzirwa mukati memazuva ano, zvezviito kubva kare kare, zviito zvakaitwa nemutambi, pfungwa, kana kwete mumuviri uyu muhupenyu huno, mune imwe muviri hupenyu hwekare.
Kuona kuratidzira kwezviratidzo, ndeyevanhuwo zvavo vanodiwa kuti vave nezvioni zvinopfuura rimwe. Chikamu chinokosha chekuedza ndiko kuva nechiedza chichaita kuti fomu yake nezviito zvayo zviratidzwe. Nenzira imwechete iyo inokosha kune uyo aizoona kuwirirana pakati pe fomu yake yemazuva ano nezviito zvayo nemamwe maitiro uye zviito zvavo munguva yakapfuura, uyewo nemamwe maitiro munyika nhasi, kuva nemhando ye- zuva uye rinomira muchiedza chepfungwa. Pakarepo kana chimiro ichi ichionekwa muchiedza chepfungwa, kuratidzwa uku mune chiedza chepfungwa, apo chiedza ichi chakazvishandurwa pachako, chicharatidza zvakare uye zvakare. Kufungidzirwa kwega kwega kuenderera mberi kwekufungisisa kwekare, imwe neimwe ye fomu yapfuura. Zvadaro maitiro ose nemafungiro ayo anouya mukati memwenje wemunhu mumwechete, kuburikidza nemutambo waro wezviitiko, achaonekwa zvakajeka uye nesimba uye kunzwisisa zvinokonzerwa nesimba rekufunga kuona, kusiyanisa, uye kusarura pakati pezvino, yapfuura uye kubatana kwavo.
Hazvidi kuti mumwe ave nezvionioni kuti aone kufungidzira kwake kana achigona kuedza nekufungisisa pfungwa dzake pachake. Mipirati yakawanda sezvaaigona kusimudza uye maanozoona maonero ake akaratidzika, kaviri uye achiwedzerwa nekusingaperi muchiverengo, saka vazhinji vanogona kuona pasina magirazi, kana akakwanisa kufungisisa pamusoro pavo mupfungwa dzake. Haana kungoona chete zviratidzo zvemuviri wake mupfungwa dzake, asi anogona kukwanisa kuonana uye kuona hukama hwezvinhu zvose zvinoitika kwaari, nehupenyu hwake hwehupenyu, uye iye achaziva ipapo kuti hapana chakaita zvinoitika asi izvo zvinobatanidzwa neimwe nzira kune hupenyu hwake huno, sekuratidzira kubva pane zviito zvehupenyu hwekare, kana zvevamwe mazuva mumahupenyu huno.
Zvose zviri munyika, zvipenyu kana zvisingatauri zvinodanwa, zvinongoratidzwa chete kana kuratidzira kuratidzwa kwevanhu mumamiriro ake akasiyana. Matombo, nyika, hove, shiri, uye mhuka mumarudzi akasiyana-siyana uye maitiro, ndezvokufungidzira uye kuratidzika mumhando dzenyama yemafungiro nezvido zvevanhu. Vamwe vanhu, mumarudzi avo ose akasiyana-siyana uye maitiro uye zvisingaverengeki zvakasiyana-siyana uye zvifananidzi, zvakanyanya kufungidzirwa kune dzimwe nhengo dzevanhu. Izvi zvingaratidzika sezvisiri zvechokwadi kune uyo asingaiti kuti aone kubatana pakati pake nezvimwe zvinhu uye nezvinhu. Zvinogona kutaurwa kuti girazi rinopa mafungiro chete, izvo zvinoratidzika hazvisi izvo zvinoratidzika, uye, kuti zvinhu zvakasiyana nemafungiro avo, uye kuti munyika mune zvinhu zviri mukati mavo sezvisikwa zvakasununguka. Kuti zvinhu zviri munyika zvakakura, zvinonzi urefu, hupamhi uye hutema, asi zvinhu zvinowanikwa mumirazi zviri pamusoro pemaonero, zvine urefu uye hupamhi, asi kwete kuwanda. Uyezve, kuti kuratidzwa mugirazi kunonyangarika nokukurumidza kana chinhu chisati chabviswa, asi zvisikwa zvipenyu zvinoramba zvichifamba sezvikamu zvakasiyana munyika. Kune izvi zvinopesana zvinogona kupindurwa kuti mufananidzo wechinhu hausi chinhu icho chinoratidzira, kunyange chiine mufananidzo wacho.
Tarisa mu-girazi. Girazi rinoonekwa here? kana mamiriro acho? kana iyo inobata chikamu uye girazi pamwe chete? Kana zvakadaro saka kuratidzwa hakuoneki zvakajeka, asi nenzira yakananga chete. Kune rumwe rutivi, ndeye chiso uye chidimbu chemufananidzo wakaonekwa zvakajeka here? Kana zvakadaro saka girazi, mamiriro aro, kana izvo zvinobatana pamwe chete zvinoonekwa. Kufungidzira kunoonekwa. Iko kuratidzika kwakabatana nei izvo zvinoratidzira? Hapana kuwirirana kunogona kuonekwa pakati pekufungisisa uye chinangwa chacho. Icho, sechiratidzwa, chakafanana seicho pachacho sechinhu icho chinoratidza.
Zvakare, girazi rinotarisa rinoratidza huwandu hwemativi echinhu chiri pachena kune iyo. Zvose zvinogona kuonekwa nemufananidzo wevamwe zvinogona kuonekwa nekufungidzirwa mu-girazi. Tinoona nzvimbo bedzi yechinhu chiri mugirazi; asi hapanazve kunoonekwa kune ani zvake munyika. Izvo chete izvo zvinowoneka pamusoro zvinoonekwa, uye chete apo inopinda inosvika kumusoro, zvino inowanikwa munyika. Zvadaro zvichazoonekwawo mune girazi rinotarisa. Pfungwa yekudzika kana hutete yakanyatsojeka uye inonzwisisika muchechi-kutarisa sechinhu chero chipi zvacho chisingabatanidzi. Kureba kunowanikwa mugirazi rinotarisa pamwe chete uye rinogona kuonekwa pasina iyo. Kunyange zvakadaro girazi rinotarisa chete. Ndizvo zvakaita nyika. Tinorarama uye tinofamba pamusoro pepasi sezvinoita zvinhu mugorozi.
Mifananidzo uye mafomu anotenderera munyika, zvinonzi zviripo mavari uye kuti zvive zvakasiyana nemafungiro avo mune girazi. Asi izvi ndizvo chete munguva yakareba uye kwete muchokwadi. Mhando iyo inofamba pamusoro penyika inongoratidzika chete, seganda-girasi. Mufananidzo wavanoratidza ndiwo muviri wekudenga. Izvo hazvisi kuonekwa; chete kuratidzwa kunoonekwa. Izvi zvakaratidza maitiro munyika ino kuramba ichifamba-famba chero bedzi sezvo chifananidzo chavanoratidzira chiri navo. Apo chifananidzo chacho chichibuda, chimiro, zvakare, chinopera, sechinhu chinotarisa. Musiyano uri munguva chete, asi kwete mumitemo.
Munhu mumwe nomumwe akasiyana nemumwe munhu wese mucheka, chimiro uye zvidimbu, asi muchidimbu chete. Kufanana kwevanhu kunoratidzwa nevose. Mhino yemhino kana iri yakadzikwa kana yakarongedzwa, yakadzika kana yakakomberedzwa, yakatsvaira kana yakaonda, yakareba kana yakfupi, yakavharwa kana yakasvibiswa, yakatsvuka kana yakanyorova; ziso ndiro ziso kana rakasviba, bhuruu kana rima, maarmond kana bhora rakagadzirwa. Iyo inogona kunge isina kunaka, mvura, moto, mvura, ichiri ziso. Nzeve inogona kuva yeropafure kana kuderera mumakero ayo, nekutarisa uye mavarai seasina kufanana segungwa regungwa kana kuti yakakura uye inorema sechidimbu chechiropa chakatsvuka, asi iyo inzwa. Miromo inogona kuratidzirwa nemasimba akasimba, akanaka kana akacheka nemitsetse; muromo unogona kuratidzika sewakaoma kana kuti wakaputika mucheche; iyo muromo zvisinei, uye inogona kubudisa inzwi kuti inakidze vanamwari vakaumbwa kana kuti inotyisa hama dzavo, madhimoni. Zvinhu zvacho zvinomunhu uye zvinomiririra zvakasiyana-siyana uye mafungiro ehupenyu hwakawanda hwomunhu hwemunhu.
Vanhu vari mhando dzakawanda kana zvikamu zvehupenyu hwevanhu hunofananidzwa mukati mehuzhinji hwezviratidzo zvemativi kana zvimwe zvakasiyana zvevanhu. Hunhu murume, murume-mukomana, uyo asingaonekwi, uyo haazvioni pachawo kunze kwekufungisisa kwemaviri, anonzi murume nemukadzi.
Takatarisa zvioni zvemuviri uye takaona zvimwe zvezvinhu zvavanoratidzira. Ngationei zvino tifunge nezvezvioni zvepfungwa.